Maxkamadda ICC oo go’aan ka gaaraysa Ruto - BBC News Somali
Maxkamadda ICC oo go’aan ka gaaraysa Ruto
5 Abriil 2016
Image caption ICC oo maanta go'aan ka gaaraysa Madaxweyne ku-xigeenka Kenya, William Ruto, iyo ninka la eedaysan, weriye Joshua arab Sang.
Qiyaastii 1200 oo qof ayaa lagu dilay qalalaase xigay doorashooyinkii 2007-dii lagu qabtay Kenya.
Mr Ruto ayaa iska fogeeyay eedaha ay ka midka yihiin dil, musaafurin iyo dhibaatayn dhanka qowmiyadda ah.
Qareenada Mr Ruto ayaa sheegaya in dambiga loo haysto uu bari ka noqon doono kaddib markii markhaatiyaal muhiim ah ay isaga baxeen amaba ay badaleen hadaladoodii hore.
Dacwad oogaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada, Fatou Bensouda, ayaa qirtay in markhaatiyada ka baxay ay kiiska ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka ka dhigeen mid daciif ah, hasayeeshee waxa ay ku dooday in ay hayaan caddeymo ku filan oo ay ku sii wadi karaan maxkamadeynta.
Afhayeen u hadlay maxkamadda ICC ayaa BBCda u sheegay in waxyaabo badan ay suuragal tahay in ay dhacaan.
Xaakimiinta ayey suuragal tahay in ay meesha ka saaraan dhammaan eedaha loo haysto Mr Ruto, oo waxaa laga yaabaa in ay waydiistaan dacwad oogayaasha in ay wax ka badalaan eedaha ama in ay diidaanba doodda kooxda difaacaysa Ruto sidaana ay dacwaddu ku sii socoto.
2014-kii, ayey dacwad ooguhu waxa ay meesha ka saartay eedo kuwa Ruto oo kale ah oo loo haystay Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, iyadoo ku andacootay in loo goodiyay markhaatiyaal taasi oo ku hogaamisay in ay badalaan markhaatikacooda.